Gazety Henja-Pisainana Nakaton’i Iran fa Nanohitra ny Fifanarahana ara-Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2015 15:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, 한국어, Български, Español, English
Nametrana ny voambolana “fanakatonana” ambonin'ny fonom-pejin'ny gazety 9 Dey ny fampitam-baovao Iraniana. Sary navoaka ho azo ampiasaina hita tao amin'ny banifilm.ir.
Nakaton'ny Sampan-draharaha Mpanara-maso ny Gazety Iraniana ny 9 Dey, gazety henja-pisainana namoaka fijery misintaka amin'ny fifanarahana ara-nokleary voasonia teo amin'i Iran sy ny firenena P5+1, nosoniavina tao Vienna tamin'ny 13 Jolay.
Tonga herinandro vitsivitsy taorian'ny namoahan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika ho an'ny mpanao gazety Iraniana amin'ny fitarihan-dalana ara-panivanana izay fomba iresahana ny fifanarahana izao fanakatonana izao. Tamin'ny tatitra ho an'ny IranWire, novelabelarin'i Mansoureh Farahani tahaka izao ilay fitarihan-dalana :
Fito ny mpikambana mandrafitra ny Birao manaramaso ny gazety ao Iran, izay ahitana ny rafi-pitsarana Iraniana, ny parlemanta, ny Vaomera Faratampon'ny Revolisiona ara-Kolontsaina, seminarista iray ao amin'ny Qom ary ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Siansa. Efa noraran'ny Birao ihany koa ny 9 Dey tamin'ny Avrily 2014 noho ny namoahany lahatsoratraheverina ho ‘manapa-tenda’ ny filoha sy ny fifaranarahana ara-nokleary.